Iyo yekutanga yekuvandudza yeFirefox Reality 1.1 yatoburitswa kare | Linux Vakapindwa muropa
Iyo yekutanga yekuvandudza yeFirefox Reality 1.1 yaburitswa
ari Vagadziri veMozilla vakaunza vhezheni itsva yeFirefox Reality, bhurawuza rakasarudzika rehurongwa hwechokwadi chaihwo.
Bhurawuza inoshandisa iyo Quantum webhu injini, asi inopa matatu-mativi emushandisi interface zvakasiyana zvakasiyana izvo zvinokutendera kuti ufambe kuburikidza nemasaiti mukati mepasirese pasirese kana sechikamu cheakawedzera chaiwo masisitimu.
1 Nezve Firefox Reality
2 Kumusoro Kwekuvandudza muFirefox Reality 1.1
Nezve Firefox Reality
Firefox Reality yakagadzirirwa seyekushandisa yeiyo Android chikuva uye inoenderana nekushandiswa kwe Samsung Gear VR, Oculus Go, Qualcomm & ODG, VIVE Focus neGoogle Daydream 3D maheti.
Zvekuyedza usina ngowani ye3D, iyo navigator inogona kutangwa pane Android-based smartphone.
Firefox Reality inovaka inowanikwa muOculus, Daydream, uye Viveport madhairekitori ekushandisa.
Mukuwedzera kune iyo interface yakagadzirirwa kudzorwa kuburikidza ne3metmete, iyo inokutendera iwe kuti utarise echinyakare maviri-mativi mapeji, iyo bhurawuza inopa vewebhu vagadziri iyo VR Web API ine VR yekuwedzera yeWebGL neCSS.
Webhu yeVR inoita kuti iwe ugadzire yakasarudzika yewebhu-yakavakirwa-matatu-mativi zvikumbiro zvekudyidzana munzvimbo chaiyo uye nekushandisa nzira nyowani dzekufamba dze 3D., nzira dzekupinda ruzivo uye nzvimbo dzekutsvaga ruzivo.
Kusanganisira zvinokwanisika kuisa zvinhu zveDOM mukati meicho chaicho chiitiko, semuenzaniso, unogona kuronga kuratidzwa kwemafurati 2D zvemukati muchimiro chesilinda yakakomberedza mushandisi.
Pazvinhu zvakagadziridzwa zvekudyidzana kwevashandisi zvinotsigirwa nebrowser, system yekuisa izwi inomirawo, ichikubvumidza kuti uzadze mafomu uye utumire mibvunzo yekutsvaga uchishandisa injini yekuziva izwi yakagadzirwa muMozilla.
Seye peji rekumba, bhurawuza rinopa chinongedzo chekuwana zvakasarudzwa zvemukati uye kufamba nenzira yeunganidzwa yemitambo, webhu kunyorera, mamodheru e3D, uye mavhidhiyo enzvimbo akagadziridzwa e3metmets.
Kumusoro Kwekuvandudza muFirefox Reality 1.1
Firefox Realit vhezheni 1.1uye inosanganisira kutsigirwa kweiyo 360-degree vhidhiyo yezvinyorwa kubva kwakasiyana masosi, kusanganisira YouTube.
Iyi ficha inofanirwa kupa inowedzeredza yekuona chiitiko pamwe neiyo nyowani theatre mode iyo inoshanda kudzikisira nharaunda yewindows yekutamba.
Pamusoro pazvo akawedzera yakasarudzika sinema modhi kuti utarise vhidhiyo pachiratidziro pasina kero bar uye yekudzora kutonga.
Nerupi rutsigiro rwakapihwa rwekutsvaga kutsvaga uye kuratidza kurudziro kana uchinge waisa data mubara rekero.
Yezvimwe zvinhu zvinogona kusimbiswa mukuburitswa uku kwatinowana:
Yakavakirwa-mumabhukumaki sisitimu inoitwa (bhukumaki kuenderana nemamwe majaira haisati yatsigirwa).
Izwi rekutsvaga izwi rinoshandiswa kushandisa mimwe mitauro isiri yeChirungu (Russian haisati yatsigirwa).
Kugadzira kunatsiridza pane izvo zvinyorwa zvemushandisi interface.
Iyo yakanyanya kuvandudza mashandiro eaviri-mativi interface.
MSAA (Multiple Sample Anti-Aliasing) tsigiro inosanganisirwa kusimudzira mhando yemifananidzo kana uchiwedzera.
Vagadziri veMozilla vaisa kuyedza kwakawanda muiyo WebVR standard iyo vagadziri vazhinji veVR application vava kuziva.
Kunyangwe iyo webhu ichiri kuda zvakati wandei kugadziridzwa kweicho chaicho chokwadi.
Izvo zvinonzwisisika, asi zvinosuruvarisa kuti chikamu chikuru chemukati chinowanikwa mune chaichoicho chakagoverwa muzvitoro zvakasiyana zvepuratifomu imwe neimwe inoda, iyo inodawo kupinda mukati, kurodha pasi uye kutanga kubva kuraibhurari yako.
Nepo iyi modhi ichiine zvazvakanakira kune vanobatana nevagadziri, vashandisi vanogona kuve nesarudzo iri nani kana zvimwe zvirinyore zviripo zvemanhasi chaiwo mahedhifoni akagadzirirwa WebVR.
Zviripachena kuti zvinhu zvakawanda zvinofanirwa kufungidzirwa zvewebhu mukati mechokwadi chaicho.
Zvichakadaro, Mozilla iri kushanda mukuwedzera hunyanzvi hwekugovana uye kuyananisa zvemukati, senge mabhukumaki, mumabhurawuza.
Uye zvakare, inoronga kuunza rutsigiro rwemawindows mazhinji uye ma tabo, pakati pezvimwe zvinhu. Dzazvino zvigadziriso zveFirefox Reality izvozvi zvinogona kutorwa pasi kubva kuViveport neOculus zvitoro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo yekutanga yekuvandudza yeFirefox Reality 1.1 yaburitswa